Ngathi | Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd.Ukuthengiswa
Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
I-Xuzhou Sunbright inee-dozes ezininzi zoluhlu lweemveliso ezidibanisa itekhnoloji ye-optical, oomatshini, yombane kunye nekhompyuter, kubandakanya ne-dopplers zombala, ii-ultrasound ze-B, iimonitha ezininzi zeparameter, ii-colposcopes, ii-electrocardiograms njalo njalo. Ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo, iShanghai Sunbright yafumana iitrasti eziphezulu kuninzi lwabathengi kunye nokuqwalaselwa kunye neenkxaso ezivela kwiinkokheli kuwo onke amanqanaba. Okwangoku i-Sunbright iye yaba luphawu oludumileyo nolukhokelayo emgceni, iseke iiofisi zamasebe ezingaphezu kwama-50 nasemva kweeofisi zenkonzo kumaphondo angaphezu kwama-20, oomasipala kunye nommandla ozimeleyo eTshayina, bathumela iimveliso kumazwe angaphezu kwama-50 eYurophu, eAsia, I-Afrika, uMzantsi Melika noMntla Melika kwaye baba liqonga elikhethekileyo leSunbright elithengiswayo kunye nenkonzo. "Umgangatho ogqwesileyo, inkonzo egqwesileyo" uhlala umgaqo-nkqubo wekhampani yethu esemgangathweni.
I-Ultrasound, Umbala weDoppler kunye neeproses ezihambelanayo zohlobo oludumileyo zihlala ziyimveliso ephambili yeSunbright. Kwi-2019, uSunbright uphumelele amakhulu eethenda eMelika, eAfrika, eAsia naseYurophu. Imveliso yonyaka ifikelela kwiiyunithi ezingama-50000, ngokuhambelana nemveliso esemgangathweni ye-CE ISO. Ngenkqubo engqongqo yemveliso, uhlolo oluchanekileyo, iqela lenkonzo ekumgangatho ophezulu, uSunbright uzinikele ekunikezeleni ngokuqhubekayo iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo eziphezulu kubathengi behlabathi.
I-Sunbright Inkampani ineemveliso ezi-6 zemigca yokubeka esweni isigulana, i-ECG, impompo ye-infusion, iSyring Pump, i-Fetal Doppler, iPulse Oximeter kunye neThermometer. Inenkqubo yemveliso ebanzi kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo. Kuyo yonke i-chip, ibhodi okanye inxenye yayo, i-Sunbright inolawulo olucokisekileyo ukusuka kugcino lwayo ukuya ekusetyenzisweni, lokuqinisekisa umgangatho ozinzileyo womatshini. Ngaphezu, umatshini wokugqibela uya kuguga kubushushu obuphezulu kunye nobushushu obuqhelekileyo ngokwahlukeneyo kangangeshumi leeyure, esona siqinisekiso sikumgangatho ophezulu.
"Umgangatho ophezulu, amaxabiso afanelekileyo kunye nenkonzo emva kokuthengisa" ngumgaqo wethu, "Ukwaneliseka kwabaThengi" yinjongo yethu yanaphakade; iimveliso zethu zamkelwe kakuhle kungekuphela kwimarike yasekhaya kodwa nakwiimarike ezininzi zaphesheya kwihlabathi liphela.
1). Amaxabiso ngokuthe ngqo kumzi mveliso, ukhuphiswano ngakumbi, unokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubumba, kunye nokubonelela ngezixhobo ezifanayo
2). Umzi-mveliso wethu, ulawula ngokungqongqo onke amanyathelo emveliso, umgangatho wolawulo olungcono kunye nexesha lokuhambisa.
XuZhou Sunbright liqinisekisa izixhobo ezitsha ngaphandle izincedisi ukuba bakhululeke iziphene xa kusenziwa kunye nezinto ixesha kangangeenyanga ezilishumi elinesibhozo (iinyanga ezintandathu iindawo abaza kuzisebenzisa) ukususela kumhla ukuthunyelwa phantsi ukusetyenziswa kunye nenkonzo eqhelekileyo. Isibophelelo senkampani yethu phantsi kwesi siqinisekiso sinqunyelwe kulungiso, kwinketho yenkampani yethu, nayiphi na indawo ethi xa kuvavanywa inkampani yethu ingqineke inesiphene.
Inkqubo yamabango enkonzo
Nxibelelana neSebe leNkonzo ngeFom yebango leNkonzo ngolwazi oluneenkcukacha malunga nengxaki. Nceda unikeze ngenombolo yemodeli, inombolo ye-serial, kunye nenkcazo emfutshane yesizathu sokubuyela, umfanekiso ocacileyo wokubonisa ingxaki bubungqina obungcono.
Ngexesha lewaranti: Abasasazi / umthengi unoxanduva lokuhambisa iimpahla ezithunyelwa eXuzhou Sunbright ukuze zilungiswe. I-Xuzhou Sunbright inoxanduva lokuhambisa ngenqwelomoya ukusuka eXuzhou Sunbright ukuya kumhambisi / kumthengi. Emva kwexesha lewaranti: Umthengi wenza nayiphi na imithwalo kwimpahla ebuyisiweyo.
I-XuZhou Sunbright ibonelela ngoqeqesho lwasimahla lobuchwephesha kunye nenkonzo kubasebenzi bezobuchwephesha kunye nokuthengisa abasasazi beemveliso ezinxulumene noko kwaye iya kuqhubeka nokubonelela ngoncedo lobuchwephesha nge-imeyile, i-Skype njengoko kuceliwe ngabasasazi. Uqeqesho luya kwenziwa eShanghai China. Iindleko zothutho nezendawo yokuhlala zikwiakhawunti yabasasazi.
I-Sunbright inezakhono ezizimeleyo zophando kunye nophuhliso, inkqubo yolawulo lomgangatho egqibeleleyo, umgangatho ophezulu wabasebenzi. Okwangoku i-Sunbright ineengcali ezingaphezu kwe-100 zobuchwephesha, uninzi lwenzululwazi nobuchwephesha kubaphandi, abasebenzi abangaphezu kwama-300. Kulindeleke ukuba zilandele ngokungqongqo izicelo ezisemgangathweni kuwo onke amanqanaba emveliso kunye nokusebenza. Ukongeza kwinkonzo esisiseko, iSunbright inokunikezela ngenkonzo ejolise kuluntu ngokweemfuno zabathengi. Umthengi kuqala, inkonzo yokuqala ngumgaqo wenkonzo!